Iindaba -Ungayikhetha njani impompo yeslurry?
Xa uphatha i-slurry, abasebenzisi kufuneka bakhethe phakathi kolwakhiwo lwerabha okanye ulwakhiwo lwentsimbi lweempompo zabo zeludaka Eli nqaku libonisa ezinye zokurhweba kunye nokusikelwa umda okunxulumene nokusetyenziswa kwayo nayiphi na kwezi zimbini zempompo yoyilo. Itheyibhile 1 ekuqukunjelweni kweli nqaku inika isishwankathelo sokuthelekisa zombini ezi zinto zoyilo.
Oluludaka lulwelo olunezinto ezixhonyiweyo. Ukurhabaxa kwe-slurry kuxhomekeke kuxinaniso oluqinileyo, ubunzima, ukumila, kunye namandla e-kinetic amandla ahanjiselwe kumpompo. Izilayiti zinokubangela ukubola kunye / okanye ukubonakala okubonakalayo. Izinto eziqinileyo zinokubandakanya ukohlwaywa kwamasuntswana okanye izinto ezomeleleyo ezinkulu ezihlala zimile ngokungaqhelekanga kwaye zisasazwa.
Ukuchonga ixesha lokusebenzisa isitayile se-slurry pump ye-centrifugal kunokuba sisigqibo esinomceli mngeni. Amaxesha amaninzi iindleko zempompo oluludaka ziphindaphindwe kaninzi kunempompo esemgangathweni yamanzi kwaye oku kunokwenza isigqibo sokusebenzisa impompo yesilayidi kube nzima kakhulu. Ingxaki enye ekukhetheni uhlobo lwempompo kukumisela ukuba ulwelo oluza kupompa okanye alululwelo. Singachaza udaka njengalo naluphi na ulwelo olunezinto eziqinileyo ezingaphezulu kunalawo aselwayo. Ngoku, oku akuthethi ukuba impompo ye-slurry kufuneka isetyenziselwe isicelo ngasinye ngenani lezinto eziqinileyo, kodwa ubuncinci impompo ye-slurry kufuneka ithathelwe ingqalelo.
Impompo ye-slurry kwifom yayo elula inokwahlulahlulwa ibe ngamacandelo amathathu: ukukhanya, okuphakathi kunye nobunzima besilaydi Ngokubanzi, iisilayidi ezikhanyayo zii-slurries ezingacwangciswanga ukuthwala iziqina. Ubukho bezinto eziqinileyo benzeka ngengozi kunokuyilwa. Ngakolunye uhlangothi, i-slurries ezinzima ziyi-slurries eyenzelwe ukuhambisa izinto ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Rhoqo ulwelo oluphetheyo kwi-slurry enzima bububi nje obuyimfuneko ekuncedeni ukuhambisa izinto ezifunwayo. I-slurry ephakathi yenye ewela kwenye indawo phakathi. Ngokubanzi, ukuqiniswa kweepesenti kwityhubhu ephakathi kuya kusuka kwi-5% ukuya kwi-20% ngokobunzima.
Emva kokuba isigqibo senziwe malunga nokuba ujongene neslryry enzima, ephakathi, okanye elula, ke lixesha lokuba utshatise impompo nesicelo. Apha ngezantsi kukho uluhlu oluqhelekileyo lweempawu ezahlukeneyo zokukhanya, okuphakathi, kunye nobunzima besilaydi.
Ukukhanya kweempawu zesilayidi:
● Ubukho bezinto eziqinileyo buzenzekela ngengozi
● Ubungakanani beSolids <200 microns
● Udonga olungalungiswanga
● Utywala obukhethekileyo <1.05
● Ngaphantsi kwesi-5% sezinto eziqinileyo ngokobunzima
Iimpawu oluludaka Medium:
● Ubungakanani bezinto eziqinileyo ezingama-200 microns ukuya kwi-1/4 intshi (6.4mm)
● Ukumisa okanye ukungalungisi udaka
● Ubunzima obuthile <1.15
● Iipesenti ezi-5 ukuya kwezingama-20% ngokuqina
Iimpawu zeSlryry ezinzima:
● Eyona njongo iphambili yeslurry kukuhambisa izinto
● Izinto eziqinileyo> 1/4 intshi (6.4mm)
● Utyibiliko oluthile> 1.15
● Zingaphezulu kwama-20% eziqinileyo ngokobunzima
Uluhlu oludlulileyo yinkanuko yesikhokelo esikhawulezayo sokunceda ukuhlelwa kwezicelo ezahlukeneyo zempompo. Ezinye izinto eziqwalaselweyo ekufuneka ziqwalaselwe xa ukhetha imodeli yempompo zezi:
● Ubulukhuni oburhabaxa
● Imilo yamasuntswana
● Ubungakanani beeparticle
● Isantya samasuntswana nolwalathiso
● Ukuxinana kwamasuntswana
● Ubukhali bamasuntswana
Abaqulunqi beempompo zodaka bazithathele ingqalelo zonke ezi zinto zingentla kwaye bayile iipompo ukunika umsebenzisi isiphelo ubuninzi bobomi obulindelweyo. Ngelishwa, kukho ukungalungelelananga okwenziweyo ukuze kubonelelwe ngobomi bempompo obamkelekileyo. Le tafile imfutshane ilandelayo ibonisa inqaku loyilo, isibonelelo, kunye nolungelelwaniso lwempompo oluludaka.